Idyllic yokurhoxa ngoxolo ukubaleka kuyo yonke into - I-Airbnb
Idyllic yokurhoxa ngoxolo ukubaleka kuyo yonke into
Uvimba sinombuki zindwendwe onguNicki
Ibhari entle esanda kuguqulwa kwindawo enoxolo yasemaphandleni. Ipropathi ixhotyiswe kakuhle ngekhefu leveki yonke kwaye yonwabela ukudityaniswa komlinganiswa kunye nesimanjemanje, kunye nemiqadi eveziweyo equlunqa impahla ekhethwe ngononophelo kunye neempawu zomgangatho.
Ibekwe kumhlaba wepropathi yomnini kwaye ibekwe kude nesiphithiphithi kunye nokuphithizela kwedolophu yaseBallygar, le yipropathi yokuguqulwa kwendlu yangaphandle, Indawo kaTom Mary.
Olu hlaselo lufudumala intliziyo lufanelekile kwisibini esijonge eholideyini phakathi kwefama ezukileyo ye-East County yaseGalway, kodwa ikufutshane nesixeko saseGalway.
Ipropathi ixhotyiswe kakuhle ngekhefu leveki yonke kwaye yonwabela ukudityaniswa komlinganiswa kunye nesimanjemanje, kunye nemiqadi eveziweyo equlunqa impahla ekhethwe ngononophelo kunye neempawu zomgangatho.
Qalisa iibhutsi zakho zokuhamba ngaphakathi epasejini ngaphambi kokuba uphumle kubusuku bakho ngaphakathi kwegumbi lokuhlala elivulekileyo, apho uya konwaba kukufumana yonke into onokuyidinga.
Thatha imveliso yasekhaya kwivenkile engaphakathi e-Ballygar kwaye ujonge phambili ekufumaneni ukutya okumnandi okuphekwe ekhaya ukuze wena kunye nomntu omthandayo nizonwabele kwitafile yokutya esesikweni.
Ngaphaya nantsi indawo yokuhlala eyamkelekileyo, apho wena kwaye upholile phambi kweTV, ngelixa ubushushu besitovu samaplanga buqinisekisa indawo ezolileyo njengoko uphumla ngorhatya.
Njengoko urhatya lusondela esiphelweni, phumla kwigumbi lokulala eliphindwe kabini apho uya kufumana i-king-size-size-size double, iilinen ezisemgangathweni kunye nendawo eyaneleyo yokugcina izinto zakho zobuqu.
Ukuba undwendwela ngeenyanga zasehlotyeni, wena kunye neqabane lakho ninokonwabela ikofu yakho yasekuseni kwindawo yepatio yabucala okanye ukonwabele indawo yokutyela i-allfresco njengoko ubamba amagqabantshintshi okukhanya kwelanga ngexesha lasemva kwemini ezolileyo.
Ngelixa ulapha, wena kunye neqabane lakho lenja ninokwenza eyona ndawo intle yengca ukolula loo milenze.
Ukuba ungazikrazula kude kule ndawo yokuhlala intle, yiya kwidolophu ekufutshane yaseBallygar, apho uya kufumana ukhetho lweendawo zemveli zaseIreland kunye nevenkile yokuthatha izinto ezibalulekileyo.
Kungenjalo, qhubela phambili kancinci ukuya kwiidolophu ezinkulu zaseRoscommon naseAthlone, apho uya kufumana ukhetho olukhulu lwezinto eziluncedo.
Umtsalane ngaphakathi kwendawo eyingqongileyo ibandakanya inkulungwane ye-13 yeRoscommon castle kunye nesixeko saseGalway sibamba uluhlu oluninzi lweempawu zembali kunye namathuba amahle okuthenga.
Indawo kaTom noMary sisiseko esithandekayo sokujonga le ndawo yaseIreland kunye nomntu omthandayo.
Umtsalane ngaphakathi kwendawo engqongileyo ibandakanya inkulungwane ye-13 yeRoscommon castle kunye nesixeko saseGalway sibamba uluhlu oluninzi lweempawu zembali kunye namathuba amahle okuthenga.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicki
Indawo kaTom noMary ikwicala leKelly's Lodge apho abanini behlala khona.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ballygar